ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ နေ့ …. | Layma's World
« ၁၃ရက်ဖွား .. စနေသား.. ဗိသုကာ( ၂) ခြံထဲက … »
sin dan lar, on February 14, 2009 at 4:02 pm said:
စိတ်ကူးသက်သက်ပါဆိုတာ.. ဟုတ်ပါ့မလား၊ ဟုတ်လို့လား
သားကြွက်, on February 14, 2009 at 4:05 pm said:
ခစ် ခစ် ခစ် ခစ် နဲ့ ကြည်နူးစရာလေး 😛
စချင်စိတ်မရှိလောက်အောင် ခံစားချက်ကပြင်းနေတော့ ရောယောင်ပြီး ရယ်သွားတယ်
အဟတ်ဟတ် ( မျှားပြာရယ်နည်း)
ကွိကွိကွကွ ( ….)
ဟွန်းဟွန်း ( မလေး ရယ်နည်း)
ငှင်းငှင်း ( မစန်ဒါ ရယ်နည်း)
မောလ်ိုက်တာ ပြန်တော့မယ် အေးကြည်မကို ဖလိုက်နဲ့ ပန်းခြင်းပို့ရမယ် 😉
ပန်ဒိုရာ, on February 14, 2009 at 4:17 pm said:
ဟုတ်လို့လား မယုံပါဘူး အသက်ငင်.. အဲ အသက်ဝင်လွန်းနေတယ်
THS, on February 14, 2009 at 5:03 pm said:
အပြောကောင်းတော့ စိတ်ဆိုးပြေသွားတယ်ပေါ့ ၊ အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားများ လူပျိုယောင် ဆောင်သောနေ့ မိုက်တယ်ဗျာ 🙂
ညိမ်းညို, on February 14, 2009 at 5:27 pm said:
ဖတ်ပီးတော့ ပြုံးမိတယ် ကြည်နူးမိတယ်
အဲ ပီးတော့ ဇာတ်ကောင်ပြောတာကို ထောက်ခံလိုက်မိတယ် 😛
MhawSayar, on February 14, 2009 at 5:35 pm said:
အရေးအသားတွေ အမြဲလတ်ဆတ်တယ်ဗျို့. :))
[စိတ်ကူးသက်သက် ဝတ္ထုတိုဟူ၍ကား လုံးလုံးမျှ မထင်မိချေ 😛 ]
ဒေါင်းမင်း, on February 14, 2009 at 5:53 pm said:
BLACK DREAM, on February 14, 2009 at 6:17 pm said:
ကောင်းတယ်အစ်မရေ…။ ကြည်ကြည်နူးနူးလေးနဲ့ ဖတ်ရတာ တယ်လဲ အရသာရှိတာပဲဗျာ…။ 🙂
nu-san, on February 14, 2009 at 8:57 pm said:
လေးမရေ..စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်တဲ့လား.. ယုံပါဘူးနော်.. 🙂
ကောင်းကင်ကြီးဆီကနေ ချောကလက်တွေ အများကြီးရတယ်..ဟုတ်???. 😀
ပုံရိပ်, on February 14, 2009 at 9:56 pm said:
ပျော်စရာ အိမ်ထောင်ရှင်များ နေ့ပါ မလေးမ။
mtj, on February 14, 2009 at 10:53 pm said:
သြော်… စိတ်ကူးသက်သက်ကိုး.. 😀
လွမ်းလုင်, on February 15, 2009 at 2:21 am said:
ဖတ်ရတာ တကယ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ် အစ်မရေ… အိမ်ထောင်ရှင်များနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ… 🙂 😀
နှင်းပွင့်ဖြူလေး, on February 15, 2009 at 8:11 pm said:
အိမ်ထောင်ရှင်ယောကျာ်းများ လူပျိုယောင်ဆောင်သောနေ့က ဘယ်နေ့လဲ ဟီးးး
SoeMoe, on February 16, 2009 at 8:46 am said:
nhn, on February 16, 2009 at 2:59 pm said:
ရှင့်ကြောင့်… ရှင့်စကားတွေ… အပြုအမူတွေအောက်မှာ မှိုင်းမိပြီး ကျွန်မရဲ့ လူငယ်ဘ၀ပျောက်ဆုံးနေတာ…။ ရှင်တရားခံ….ရှင့်ကြောင့်….။
အဲဒီ စကားလုံးတွေ အကြိုက်ဆုံးပဲ 🙂
layma-layma, on February 17, 2009 at 5:53 pm said:
>sin dar lar … မပန် .. မှော်ဆရာ.. ဘယ်လို ပြောပြော မယုံကြဘူးပေါ့နော်.. ၀တ္ထုနဲ့မတူဘူးပေါ့နော် 😦
>မောင်မျိုး… ရယ်နည်းပေါင်းစုံနဲ့ရယ်ပြသွားနိုင်အောင် ခံစားနေရတယ်..။ ခစ်.. ခစ်..။
>ဘိုတင့်.. ဘိုညိမ်း.. တော်တော် ထောက်ခံ လိုလားနေတယ်ပေါ့လေ… တိုင်လိုက်ရမလား…။
>ဒေါင်းမင်း.. ရှိမှာပေါ့.. အပျိုယောင်ဆောင်သောနေ့ .. အစ်မဆို နေ့ တိုင်းပဲ…။:P
>blackdream .. ဖတ်ရတာ အရသာရှိဆို..လက်မဆေးဘဲ နယ်ထားတာကိုး.. အဲလေ.. အသုတ်စုံနဲ့ရောကုန်ပြီ … နီးစပ်ရာ ဖြစ်ရပ်လေးတွေ အခြေခံထားတာလို့ပြောတာ…။
>မနုစံ.. ယုံပါ အစ်မရယ်… စိတ်ကူးတစ်ဝက်… အမှန်တစ်ဝက်… ချောကလက်အပဲ့တောင် မရဘူး…။
>မပုံရိပ်.. လွမ်းလုင်…. အိမ်ထောင်ရှင်များနေ့မသတ်မှတ်ရသေးဘူးလေ.. အဟဲ.. ကျေးဇူးပါ..။
>ကိုအတာ… ဘာသံကြီးတုန်း.. မယုံသင်္ကာသံကြီး..။
>နှင်းပွင့်ဖြူလေး… မသိသေးလို့ ပေါ့ ညီမရယ်… သိများသိလို့ ကတော့… ဟွန်း… ဟွန်း.. ဟွန်းး….။
>စိုးမိုးလေး… ဘယ်သု့ စိတ်ကူးက ကောင်းတာလဲ…။ ရေးတဲ့သူလား..။ ဇာတ်ကောင်ယောက်ျားလား…။
>ကိုညိုထက်… ဟီး.. လေးမလည်း အဲဒီစကားလုံးတွေ အကြိုက်ဆုံးပဲ…။
နေ့အိပ်မက်, on February 17, 2009 at 11:22 pm said:
မမရယ်… သူချောကလက်မကျွေးရင် မမ၀ယ်ကျွေးလိုက်ပေါ့…
ပြီးမှပြန်လုစား.. ကောင်းဝူးလား… 😛
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်, on February 19, 2009 at 11:45 am said:
မလေးမ ကတော့ Always အတွေးအရမ်းကောင်းတယ်…
မိ, on February 20, 2009 at 6:58 am said:
ကျောင်းတုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ ပန်းခြေါက် အခုထိရှိသေးတယ်ကို ….ဟိုးက အမှိုက်ပုံကြီးထဲမှာ
ကို ခွာပေးနေကြ နေကြာစေ့လေးတွေကို သိမ်းထားတယ် ….ဟိုးတွင်း ထဲမှာ
ကိုနဲ့ ပတ်သက်သမျှ အမှတ်တယတွေ ချည်းပါပဲ ကို ရယ်
ခစ်ခစ် ကြက်သီးတောင် ထတယ်အေ ဟီး လေးမ ငါတော့ ဖွခဲ့ပီ လစ်ပြီ
layma-layma, on February 22, 2009 at 9:44 pm said:
>နေ့ အိပ်မက်.. ကောင်းလယ်…ကောင်းလယ်…။
>ကိုရင်နော်.. မခင်လေး… အဟိ.. ဇူးဇူး..။
>မိ.. အစုတ်ပလုတ်.. ဂုတ်စုတ်…။ လာမဖွနဲ့ညာချသွားတဲ့ အကြောင်းတွေကို..။ ငိုလိုက်မှာ…။ရွှတ်….။
အဇ္ဈတ္တပြခန်း, on February 22, 2009 at 10:54 pm said: